Maxkamada ciidamada Puntland oo 8 qof ku riday xukuno dil & xabsi – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa maanta xukunno kala duwan ku ridey 8 nin oo dhallinyaro ah, kuwaasoo lagu soo eedeeyey inay ka tirsan yihiin Al-shabaab.
Afar kamid ah sideedaas qof waxaa lagu xukumey dil toogasho ah iyadoo afarta kalena lagu ridey xukuna isuga jira xabsi daa’im iyo xabsi ciidan oo mudadiisu tahay inta u dhexeysa toban ilaa shan iyo toban sano.
1.Maxamed Cabdi Axmed Olol, 23jir ah, ku dhashay Buuhoodle.
2.Xaajow Shiikh Nuur Cumar, 21 jir ah, ku dhashay Mareerey.
3.Ismaaciil Cabdulqaadir Jimcaale Cali (Rabiile), 20 jir ah.
4.Xasan Xuseen Cabdi, 23 jir ah.
1.Aadan Maxamed Yuusuf, 23 jir ah.
2.Cabdixakiim Maxamed Ciise, 24jir ah, ku dhashay Burco.
1.Cabdirasaaq Shariif Cumar, 17jir ah, ku dhashay Jamaame.
2.Maxamed Cabdulaahi Axmed, 18jir ah ku dhashay Muqdisho.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa labadii sano ee ugu dambeeyey xukuno kala duwan ku riddey tobanaan qof oo badankoodu ku eedaysnaayeen inay ka tirsan yihiin Al-shabaab.